SMT Pcb Assembly - SHENZHEN KAISHENG pcb., LTD
SMT pcb Assembly- pcbFuture
Izwi rakakosha: SMT Assembly, PCBA prototype, SMT PCB gungano, PCB SMT
Sahunyanzvi pcb gadzira mugadziri, uye isu tine anopfuura gumi mune iyo SMT PCB gungano. Isu takazvipira kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu kubva kumaindasitiri akasiyana murefu yemhando, kuendesa, kudhura-kushanda uye pcb mhinduro. Ipa zvakare yakasarudzika sevhisi sevhisi. Isu tinoshandura pcbc kune yako bhajeti uye yekuchengetedza yako nguva kuti uwane musika.
Sei sarudza yedu SMT pcb gungano?
1.24-awa online quote.
2. Inokurumidza 12-awa sevhisi yePCB prototype.
3.Mitengo inodhura uye yemakwikwi.
4. Basa rebvunzo rakavakirwa pane zvakatarwa nevatengi.
5. Chikwata chedu chehunyanzvi uye chakavimbika chinoita kuti zvive nyore kwauri kuti umise kana kugadzirisa matambudziko. Izvi ndizvo zvatinoda kugutsa vatengi vedu. Isu tinopa yakazara seti yemasevhisi kubva kudunhu dhizaini kune akapedza maturusi emaprinta wedunhu mabhodhi Isu tinogara tichifara kukupa iwe neyekutanga-kirasi masevhisi.
6. Makore gumi ane ruzivo muElectronics Zvinhu zvinotenga nzvimbo.
7. Isu tinonunura maPCB ako zvakananga uye nekukurumidza mushure mekupedzisa kubva kufekitori.
8. Yakavimbika SMT Fekitori Ine 8 SMT Lines, 100% Yekuita Kuyedza, Prototype Kugadzira, Inodhura-Inoshanda Solution.
1.Kumumvuri pcb gungano
2.double-mativi pcb gungano
3.multi-rukoko pcb gungano
4.aluminum pcb gungano
5.Flexible pcb gungano
6. Kurumidza Tendeuka PCB pungano
7.Turnkey pcb gungano
8. SMT stencil yakagadzirwa nesimbi ye laser-cut solder paste prints.
Maitiro eSMT PCB Assembly:
Maitiro ekushandisa SMT kugadzira zvigadzirwa zvePCB zvinosanganisira kushandiswa kwemuchina wekushandisa kuunganidza zvigadzirwa zvemagetsi. Muchina uyu unoisa zvinhu izvi pabhodhi redunhu, asi zvisati zvaitika, iyo PCB faira inofanirwa kuongororwa kuti isimbise kuti havana matambudziko anokanganisa kugadzirwa nekushanda kwechigadzirwa. Mushure mekusimbisa kuti zvese zvakakwana, maitiro eSMT pcb gungano haina kuganhurwa kune soldering nekuisa zvinhu kana makomponi paPCB.Iyi inotevera nzira yekugadzira inofanirawo kuteverwa.
1. Isa pasoda pasita
Nhanho yekutanga paunounganidza iyo SMT pcb bhodhi iri kuisa iyo yekunamatira pasita. Iyo pasita inogona kuiswa kune iyo PCB kuburikidza nesilika tekinoroji tekinoroji. Inogona zvakare kushandiswa uchishandisa pcb stencil yakagadzirirwa kubva kune yakafanana CAD kuburitsa faira. Iwe unongoda kucheka stencils uchishandisa laser uye woisa iyo yekunamatira pasita kune izvo zvikamu izvo iwe zvauchasanganisa izvo zvikamu. Iyo solder paste application inofanira kuitirwa munzvimbo inotonhorera. Paunenge wapedza kunyorera, unogona kumirira imwe nguva yekuungana.
2. Kuongororwa kwepasita yako yekunamatira
Mushure mekunge pasoda yaiswa mubhodhi, danho rinotevera ndere kugara uchiongorora kuburikidza neasolder paste maitiro ekuongorora. Maitiro aya akakosha, kunyanya kana uchiongorora nzvimbo yesoda pasita, huwandu hwesodha yakashandiswa, uye zvimwe zvakakosha zvinhu.
3. Nzira yekusimbisa
Ingoitika kuti bhodhi rako rePCB ririkushandisa zvikamu zveSMT kune ese mativi, panenge paine chikonzero chekufunga kudzokorora nzira imwecheteyo yechipiri divi yekusimbiswa. iwe uchave unokwanisa kuteedzera yakanakira nguva yekufumura iyo solder paste kune tembiricha tembiricha muno. Apa ndipo apo bhodhi rako redunhu parakagadzirira kuunganidzwa. Izvo zvinongedzo zvicharamba zvakagadzirira fekitori inotevera.
4. Kiti dzekuunganidza
Izvi zvinonyanya kubata neBOM (Bhiri reMidziyo) inoshandiswa neCM yekuongorora dhata. Izvi zvinofambisa kusimudzira kweBOM kits kits.
5. Kuchengeta kits ine zvinhu
Shandisa iyo barcode kuiburitsa kunze kwechitoro uye uiise mune yegungano kit. Kana izvo zvikamu zvikaiswa zvizere mukiti, zvinotorwa kunotora uye nekuisa muchina unonzi pamusoro pegomo tekinoroji.
6. Kugadzirira kwezvinhu zvekuisa
Chishandiso-uye-nzvimbo chishandiso chinoshandiswa pano kubata chese chinhu cheungano. Muchina unoshandisa zvakare katuriji inouya nekiyi yakasarudzika inoenderana neyeBOM gungano kit. Mushini wakagadzirirwa kutaurira chikamu icho katuriji inobata.
Iyo SMT gungano maitiroiri kuchinja iyo PCB yekugadzira maitiro uye kuitora kune inotevera nhanho. Iyi tekinoroji inodhura, inoshanda uye yakavimbika yekugadzira maPCB. Chinhu chega chinotarisirwa mune ramangwana ndechechokwadi kusimudzira kwese SMT pcb tekinoroji sezvo isiri nzira iri nyore. Nhau dzakanaka ndedzekuti kunyangwe nanhasi, iwe unogona kuwana yakavimbika pcb mabhodhi pamutengo unodhura. Zvakangodaro, zvakakosha kuti ubate mainjiniya akavimbika kana mugadziri nemidziyo yakakodzera uye neruzivo kuti uwane zvido zvebhodhi rako. Kuti ikubatsire kuti unzwisise mugadziri akanakisa, unogona kugara uchifunga kushandisa zvishandiso zvazvino, zvekutanga-kirasi zvigadzirwa, mitengo inodhura, uye vagadziri vanounza nenguva.
PcbFuture's basandeyekupa indasitiri ine yakavimbika yepamusoro pcb yekunyepedzera uye musangano masevhisi kubva kumumvuri kugadzirwa nenzira isingadhuri. Chinangwa chedu ndechekubatsira mushandisi wega wega kuve akarongeka, mushandi wezvemhando dzakasiyana uyo anogona nechivimbo kuunza hunyanzvi, hwekucheka-kumucheto mainjiniya mazano kutakura pane chero huwandu hwemabasa akakodzera, matambudziko, uye matekinoroji.